စပိန်၏အလယ်ခေတ်မြို့များ- Santillana del Mar မှ Montefrío | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 30/04/2022 19:15 | Espana, လမ်းပြ
ရာဂဏန်းရှိတယ် စပိန်ရှိ အလယ်ခေတ်မြို့များ. ၎င်းတို့သည် အချိန်ကာလ ရပ်တန့်သွားပုံရသော မြို့များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထံ သွားရောက်လည်ပတ်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ မင်းမျိုးမင်းနွယ်များ သို့မဟုတ် သူရဲကောင်းဆန်သော အတိတ်ဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးကြသည်။ အိမ်ခန်းနယ်နိမိတ်ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ကြီးမားသော စီးပွားရေးအချက်အချာများ။
၎င်း၏ ကျဉ်းမြောင်းသော အစပ်လမ်းများပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ရင်း ၎င်း၏ဘိုးဘွားအိမ်များကို မြင်တွေ့ရပြီး လှပသော အထိမ်းအမှတ်များကို လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အလယ်ခေတ်မှ ဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ ခံစားစေပါသည်။ ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးအရာက သူတို့ကို သင်တွေ့နိုင်တာပါ။ စပိန်၏ပြည်နယ်အားလုံးမှ ဘာစီလိုနာ ထ Cáceres နှင့် Cantabria ထ ဂါ. ဤအရာအားလုံးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စပိန်ရှိ အလယ်ခေတ်အလှဆုံးမြို့များကို လေ့လာကြည့်ရှုရန် အဆိုပြုပါသည်။
1 စပိန်၏အလယ်ခေတ်မြို့များကြားတွင် ဂန္တဝင်ဖြစ်သည့် Santillana del Mar
2 Besalú၊ အထင်ကြီးလောက်စရာ Romanesque အမွေအနှစ်တစ်ခု
3 Huesca Pyrenees ရှိ Aínsa
4 Burgos ရှိ အလယ်ခေတ်မြို့၊ Frías
5 Albarracín၊ စပိန်နိုင်ငံ၏ အလယ်ခေတ်အလှဆုံးမြို့များထဲမှ နောက်တစ်ခု
6 Montefrío၊ အလယ်ခေတ် Andalusian
စပိန်၏အလယ်ခေတ်မြို့များကြားတွင် ဂန္တဝင်ဖြစ်သည့် Santillana del Mar
Santillana del Mar သည် စပိန်တွင် အလယ်ခေတ်အရှိဆုံးမြို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိ အလယ်ခေတ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးမြို့အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်ကို စတင်ပါသည်။ စပိန်ရှိ အလယ်ခေတ်မြို့တစ်မြို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ တစ်ဦးဦးကို မေးမြန်းခံရပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Santillana del Mar ကိုဖြေဆိုကြမည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် နှလုံးသားထဲတွင် လှပသော Villa တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပင် Cantabria. အချည်းနှီးမဟုတ်၊ အနုပညာသမိုင်းဝင်အဖွဲ့ နှင့်၏ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် စပိန်အတွက်အလှဆုံးရွာ. တကယ်တော့ ဒီမြို့ဟာ အလဟသ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ၎င်း၏ အဆောက်အဦအားလုံးနီးပါးတွင် စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုခုရှိသည်။
ဒါပေမယ့် သင်မြင်ရမယ့်အရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ကိစ္စဖြစ်၏။ Santa Juliana ၏ကောလိပ်ဘုရားကျောင်းXNUMX ရာစုတွင် Romanesque canons များအတိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း XNUMXth တွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ မြို့တော်လေးဆယ့်နှစ်မြို့ပါသော ၎င်း၏ကျောင်းတော်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် သေချာပါစေ။ ခံ့ညားမှုကို မြင်တတ်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။ သဲနန်းတော်ရောင်စုံလက်ရာများဖြင့် အစောပိုင်းလက်ရာများ ၏ ရတနာဖြစ်သည်။
Santilana မှာ သင်မြင်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရိုးရာအိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ Viveda၊ Mijares သို့မဟုတ် Valdivieso ဘုံဗိမာန်များအပြင် အဆောက်အဦး၏ ဘုံဗိမာန်များသို့လည်း သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ မြို့အမှုအရေးဆောင်ရွက်ရာအဆောက်အဉီ, ခန့်ညားထည်ဝါစတိုင်။ တိုတိုပြောရရင်၊ ဒီ Cantabrian မြို့မှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦတွေအားလုံးက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ၎င်းတို့တစ်ဦးစီအကြောင်း သင့်အား ပြောပြရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၊ Quevedo နှင့် Cossío၊ Villa၊ Archduchess သို့မဟုတ် Don Beltrán de la Cueva၊ del Merino နှင့် Don Borja တို့၏ တာဝါတိုင်များကို ကြည့်ရှုရန် သင့်အား အကြံပြုပါမည်။ ဒါတွေအားလုံး မမေ့ဘဲနဲ့ Altamira ပြတိုက်၎င်း၏ ထင်ရှားသော လိုဏ်ဂူများ၏ ပုံတူနှင့်၊
Besalú၊ အထင်ကြီးလောက်စရာ Romanesque အမွေအနှစ်တစ်ခု
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်နယ်ရှိ La Garrocha ဒေသသို့သွားကြသည်။ ဂျရိုနာစပိန်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ အလယ်ခေတ်မြို့လေး Besalú အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ ဗီလာတွေဆီ မြန်မာစာနဲ့ ပြီးသွားပြီ တံတား XNUMX ရာစုကတည်းက အံ့မခန်းပါပဲ။ ၎င်းသည် အရှည် တစ်ရာ့ငါးမီတာ တိုင်းတာပြီး မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ တာဝါတိုင်သုံးလုံးသည် ထင်ရှားသည်။ နှစ်ခုသည် နံရံဘေးတွင်ရှိပြီး တတိယတစ်ခုသည် ဆဋ္ဌဂံပုံဖြစ်ပြီး အလယ်တွင် အမြင့်မီတာသုံးဆယ်ရှိသည်။
Besalú လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာသမိုင်းဝင်အဖွဲ့. ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဂျူးရပ်ကွက် တရားဇရပ်ဟောင်း၏ ရုပ်ကြွင်းများကို သင်မြင်နေရဆဲဖြစ်သော လမ်းကျဉ်းများ miqvehရေချိုးရာနေရာ၊ သူ့အပိုင်း၊ Sant Pere ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၀ ရာစုတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင် ဘုရားကျောင်းတစ်ခုသာ ကျန်ရှိတော့သည် ။ တူညီသောရင်ပြင်တွင်၊ သင့်တွင် Cornellà အိမ်နှင့်အဟောင်းရှိသည်။ Sant Julia ဆေးရုံXII မှမျက်နှာစာနှင့်အတူ။
La San Vicente ၏ဘုရားကျောင်း ၎င်းသည် XNUMX ရာစုမှ Romanesque ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်ပြီး နံရံအပြင်ဘက်တွင် ရဲတိုက်၏အကြွင်းအကျန်များနှင့် San Martín ဘုရားကျောင်းတို့ကို သင်မြင်နိုင်သည်။ သို့သော် အများအားဖြင့် ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်များစွာတွင် မပေါ်နိုင်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်အား အကြံပြုလိုပါသည်။ သင်သည် Besalú တွင်ရှိသောကြောင့်၊ လာပါ။ Castellfullit de la Rocaသေးငယ်သော လှပသော အလယ်ခေတ်မြို့လေးဖြစ်ပြီး ဒေါင်လိုက်ရှိသော ချောက်ကမ်းပါးမှ ဆွဲငင်နေပုံရသည်။
Huesca Pyrenees ရှိ Aínsa
စပိန်နိုင်ငံရှိ အလယ်ခေတ်အလှဆုံးမြို့များထဲမှ နောက်ထပ်မြို့များမှာ Aínsa ပြည်နယ်၏ Sobrarbe ဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ Huesca. ၎င်း၏သမိုင်းဝင်ကျက်သရေအတွက်၎င်းသည် အခွင့်ထူးခံသဘာဝကိုထပ်လောင်းပေးသည်၊ Sierra နှင့် Guara Canyons ၏သဘာဝဥယျာဉ်.
ဒါကြောင့် အလယ်ခေတ်က Aínsa ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီက မီးလက်ဝါးကပ်တိုင်ရဲ့ အံ့ဖွယ်အမှုကြောင့် 724 မှာ အုတ်မြစ်ချခဲ့တယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ သူမ၏အဆိုအရ၊ ဤသဘာဝလွန်ဒြပ်စင်၏အသွင်အပြင်ကြောင့် Garci Ximénez ၏ခရစ်ယာန်တပ်များသည်မွတ်စလင်များကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဆယ့်ခုနစ်ရာစုတွင် တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ဗိမာန်တော် ယနေ့မြင်တွေ့နေရဆဲဖြစ်သော ဤဇာတ်လမ်းကို ပြန်အမှတ်ရရန် အတွင်းမှ။
ဒါပေမယ့် Aínsa ရဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့ သင်္ကေတကတော့ သူ့ရဲ့ သင်္ကေတပါပဲ။ ရဲတိုက်1931 ရာစုဝန်းကျင်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုမြို့၏ မူလဇစ်မြစ်မှာ မြို့ပတ်ပတ်လည်တွင် အခြေချနေထိုင်သူများကို ကာကွယ်ရန် မြို့ရိုးများ တိုးချဲ့ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ XNUMX ခုနှစ်ကတည်းက ၎င်းသည် အနုပညာသမိုင်းဝင် အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Huesca မြို့၌လည်း ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ Santa Maria ၏ဘုရားကျောင်းRomanesque canons များနောက် ၁၁ ရာစုနှင့် ၁၂ ရာစုကြားတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ archivolts လေးခုပါသော portal နှင့် စည်တစ်ဝက်ပါရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော ရေတပ်ပေါ်တယ်သည် ၎င်း၏ရိုးရှင်းစွာဖြင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော်လည်း Aragonese Romanesque တွင် ထူးခြားသောအတိုင်းအတာရှိသော ရဲတိုက်ဖြစ်သည်။
လှလှပပ ဖြတ်သန်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ Main SquareXNUMX ရာစုမှ Arnal နှင့် Bielsa အိမ်များကို မမြင်ရဘဲ ဖွင့်ထားပြီး ၎င်း၏ arcades များ။ သို့သော် အထူးသဖြင့် မင်းအလယ်ခေတ်ကလို ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အစပ်လမ်းတွေကို ဖြတ်လျှောက်ပါ။
Burgos ရှိ အလယ်ခေတ်မြို့၊ Frías
Burgos ပြည်နယ်ရှိ အလယ်ခေတ် ကျောက်မျက်ရတနာ Frías ၏ မြင်ကွင်း
လူဦးရေ သုံးရာထက်မနည်းရှိတဲ့ ဒီမြို့လေးကို သိလိုက်ရတော့ အံ့သြသွားလိမ့်မယ်။ Burgos ၏ခေါင်းစဉ်ကိုကိုင်ထားသည်။ မြို့ ရှင်ဘုရင် အပ်နှင်းသည်။ Castile မှ John II 1435 ခုနှစ်တွင် ၎င်းသည် သင့်အား အလယ်ခေတ်တွင် အရေးပါသော အကြံဥာဏ်တစ်ခု ပေးလိမ့်မည်။
၎င်း၏ ကြီးမားသော သင်္ကေတတစ်ခုမှာ အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ Romanesque တံတား ၁၃ ရာစုမှစပြီး ၎င်း၏အရှည်မှာ မီတာတစ်ရာ့ငါးဆယ်နီးပါးရှိကာ စပိန်တွင် အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် ညွှန်ပြသည့် ၎င်း၏ arches အချို့ကဲ့သို့သော Gothic အစိတ်အပိုင်းများကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နောက်တော့ ဗဟိုမျှော်စင်ကို တန်ဆာဆင်ထားတယ်။
သို့သော် Frías ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုမှာ၎င်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလယ်ခေတ်အိမ်များ. ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် Cuenca တွင်ရှိသူများကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်သောလမ်းပေါ်ရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုမှ ဆွဲထားပုံရသည်။ San Vicente ၏ဘုရားကျောင်း နှင့် Velasco ရဲတိုက်. နောက်ဆုံးသရဖူများကို အတိအကျပြောရလျှင် La Muela တောင်သည် ၎င်း၏လက်ရှိဥပဒေကြမ်းသည် ၁၂ ရာစုမှဖြစ်သော်လည်း ၉ ရာစုတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားသည် ၎င်းအား ဧရိယာအတွက် သံသယမရှိသော ခံစစ်ဇာတ်ကောင်တစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။
San Vicente Mártir နှင့် San Sebastián ၏ အထက်ဖော်ပြပါ ချာ့ချ်အတွက်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ ရှေးဦး Romanesque ပုံစံ၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုသာ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများစွာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည့် အမျိုးမျိုးသော မတော်တဆမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အလားတူပင် ၎င်း၏အဖုံးဟောင်းကို နယူးယောက်မြို့ရှိ Cloisters ပြတိုက်သို့ သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့် Santa María de Vadillo ဘုရားကျောင်းများကဲ့သို့သော Frías ရှိ အခြားသော ဘာသာရေး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံများကိုလည်း သင်တွေ့မြင်သင့်သည်။ San Vítores ၏ Gothic ဘုရားကျောင်း. နောက်ပြီးတော့ အရပ်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လာလည်ဖို့ အကြံပေးတယ်။ တန်းလျားအိမ်နှင့် Salazar ၏နန်းတော်. ဤအရာအားလုံးကို Convención နှင့် Virgen de la Candonga ၏လက်ရှိလမ်းများတွင်ရှိသောဂျူးရပ်ကွက်ကိုမမေ့ဘဲ။
Albarracín၊ စပိန်နိုင်ငံ၏ အလယ်ခေတ်အလှဆုံးမြို့များထဲမှ နောက်တစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်းသို့ ပြန်သွားကြသည်။ Aragonအထူးသဖြင့် ပြည်နယ်၊ Teruelမွတ်ဆလင်တစ်စု ထိုအရပ်၌ အခြေချနေထိုင်ခဲ့စဉ်က XNUMX ရာစုလောက်က ခန့်မှန်းခြေအုတ်မြစ်ဖြစ်သော Albarracín အကြောင်း ပြောပြရန်။ ဤအရာအတွက် သူသည် ခံ့ညားထည်ဝါမှုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ alcazar လက်ရှိတွင် အနုပညာသမိုင်းဝင် အထိမ်းအမှတ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော် တစ်မြို့လုံးက ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ကိုင်ထားသည်။ သမိုင်းဝင် အထင်ကရ အဆောက်အအုံ. မွတ်ဆလင်ခေတ်မှာလည်း ပိုင်တယ်။ လမ်းလျှောက်တာဝါမြို့၏ ခံစစ်တံတိုင်းများ ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့် အချိုးညီညီသည် ပန်းခြံ၏တစ်ဖက်စွန်းတွင်ရှိသော Doña Blanca မျှော်စင်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ ရဲတိုက်ရဲ့ဘေးမှာ မင်းရှိတယ်။ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းXNUMX ရာစု Romanesque ဘုရားကျောင်း၏ အကြွင်းအကျန်များကို XNUMX ရာစုတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Gothic၊ Renaissance နှင့် Baroque စတိုင်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ အတွင်းတွင်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော Flemish tapestries စုဆောင်းမှုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရဲ့ဘေးမှာ Episcopal နန်းတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ မျက်နှာစာနဲ့၊ Julianeta အိမ်လို့ ခေါ်တဲ့ Portal de Molina မှာ သာမာန်လူကြိုက်များတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မြို့အမှုအရေးဆောင်ရွက်ရာအဆောက်အဉီ ၎င်းသည် XNUMX ရာစုမှဖြစ်သည်။
Montefrío၊ အလယ်ခေတ် Andalusian
Montefrío၊ စပိန်နိုင်ငံ၏ အလယ်ခေတ်အလှဆုံးမြို့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
စီရင်စုတွင် တည်ရှိသည်။ Granada, Montefrío ၏အလယ်ခေတ်တွင်ကြီးမားသောအရေးကြီးသောရှိခဲ့သည်။ Al Andalus. တကယ်တော့ သူ့ရဲ့ရဲတိုက်က ဝင်းထဲမှာ ရှိတယ်။ Nasrid ဘုရင် Ismail III. ဤခံတပ်သည် ခမ်းနားထည်ဝါသော တောင်ကုန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွာ၏ဘုရားကျောင်းXNUMX ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ရှိလောင်မြို့သား ဒီယေဂို.
ဒါပေမယ့် Montefrío မှာ သင်မြင်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်း၏လမ်းများတစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်ပြီး ၎င်း၏အဖြူရောင်အိမ်များကို ကြည့်ရှုခြင်းအပြင် ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများစွာနှင့် ရောမမြို့နှင့် တံတားများရှိသည့် Cerro de los Gitanos ၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းကို သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်သည်။ Barranco de los Molinos တွင် ရေတံခွန်များနှင့် လက်တင်ခေတ်မှ ဆန်စက်များကို အတိအကျ မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အလားတူ၊ သင်သည်လည်းကြေငြာထားသည့် Montefrío သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်ရှိသည်။ အနုပညာသမိုင်းဝင်အဖွဲ့San Sebastián နှင့် San Antonio ၏ဘုရားကျောင်းများ၊ ပထမလက်ရာများနှင့်ဒုတိယ Baroque များ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Incarnation သည် neoclassical ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, the ကုန်သွယ်မှုအိမ် နှင့် San Juan de Dios ဆေးရုံ ၎င်းတို့သည် XNUMX ရာစုမှဖြစ်ပြီး Town Hall သည် XNUMX ရာစုမှနေထိုင်သောအိမ်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးအရာအချို့ကို သင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စပိန်၏အလယ်ခေတ်မြို့များ. သို့သော် မလွှဲမရှောင်သာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုက်လိုင်းတွင် များစွာကျန်ရှိခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ဖော်ပြရန်၊ သင့်အားကိုးကားပါမည်။ Alquezar Huesca တွင်၊ ပုသိမ် Girona မှာ Ronda မာလာဂါ သို့မဟုတ် လိမ္မော်ရောင် Navarre တွင်။ သူတို့ကို သွားလည်ပါ၊ နောင်တရမည်မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » စပိန်၏အလယ်ခေတ်မြို့များ